Olee otú ịhọrọ gị Ọgwụ Packer?
Kedu injector / injector ka m chọrọ? Ebumnuche nke isiokwu a bụ inyere gị aka ịhọrọ ihe ngwugwu kwesịrị ekwesị maka ọrụ ọgwụ ọgwụ gị. Ngwunye ogwu ahụ bụ njikọ dị n'etiti mgbapụta ọgwụ na ihe ndị na-arụ ọrụ maka ịgbanye ọgwụ dị iche iche na-ekpo ọkụ, gụnyere resin epoxy ...
Ọgwụ Packer Ngwọta N'ihi Underground Construction
Chọpụta ọdịiche dị n’etiti usoro ntinye na ntụtụ na-arụ n’ime ala. Ọ na-enyere aka ịhọrọ ihe kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ kwesịrị ekwesị na nhazi oge. Enwere ike ịkọwa ntanye dị ka iwebata ihe nrụgide n'ime ala ma ọ bụ nhazi maka waterpr ...
6 Basic Iwu nke Ọgwụ mgbapụta Machine pipip
Wụnye mgbapụta centrifugal ọhụrụ? Mgbe i jiri nlezianya họrọ oke na ihe kwesịrị ekwesị, jide n'aka na ịwụnye mgbapụta ọhụrụ ahụ n'ụzọ ziri ezi iji hụ na nrụnye nke ọma. Ọ dị mkpa ịtọ ntọala ahụ n'ụzọ ziri ezi ma dozie igwe mgbapụta ogwu. Ọ dịkwa ezigbo mkpa iji mezue p ...
Nyochaa Mmetụta nke Ngwakọta Chemical
Infrared thermal Onyonyo: ngwa ngwa na a pụrụ ịdabere ntule nke chemical grouting shotcrete owuwu Chemical grouting bụ otu n'ime ndị nkịtị ụzọ idozi cracks na mmiri penetration na ihe owuwu. Nnwale na-enweghị mmekpa ahụ na-ebelata ntinye nke ihe owuwu mgbe ị na-eduzi ...
Kedu mgbe Polyurethane na-egwupụta ihe bụ Ngwọta Ngwọta Dị Irè?
Ngwa nke ndị na-ahụ maka polyurethane na-agagharị agagharị na mweghachi nke ala na-agbanwe kpamkpam ụzọ ndị ọrụ ọhaneze na ndị isi ụlọ na-eche banyere mweghachi na nnọchi. N'ihi na-eri-irè na ọhụrụ na ọgwụ technology, na feasibilit ...
Etu ị ga - esi hu ngwugwu ogwu
Ngwunye ogwu bụ njikọ dị n'etiti mgbapụta ọgwụ na ihe ndị na-arụ ọrụ maka ịgbanye ọgwụ dị iche iche, gụnyere epoxy resin (EP), polyurethane (PU / PUR / SPUR), polyurea, acrylic gel, mmiri na-arụ ọrụ ụfụfụ, siloxane, ngwaahịa ndị a na-emepụta , microemulsion, grout, c ...
Etu aga - esi chọta ọnụ ara ara ara araba di na nwunye
Ọ bụ eziokwu amara nke ọma na osisi na-agba mmanụ na bearings nwere ike ịchekwa ọtụtụ ejiji. Ibelata mmebi na ndozi dị oke ọnụ bụ ọrụ dị oke mkpa, mana ọ dị mfe ileghara anya! Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ nwere ike ịchekwa gị nnukwu ego na oge. 1. Virtual lubrication: ever nwetụla mgbe ị chere tha ...
Ihe mgbaàmà nke mgbapụta mgbapụta dị elu
Enwere ike ịnwe injin dizel nke na - agbasi ike ma ọ bụ na - enweghị nsogbu nsogbu nnyefe nrụgide dị elu. Ọtụtụ mmanụ dizel nke oge a nwere sistemụ eletrik na-achịkwa. Usoro ochie nke nrụgide dị elu jiri usoro mgbapụta dị elu. Nsogbu nrụgide dị elu nwere ike ime ka ike dị ala, rou ...
High Pressure Griiz Dabara Adaba Na Ngwa
Nnukwu nrụgide mmanu mmanu (ma ọ bụ onu griiz, akwa Zerk, plọg mmanụ, ihe ndozi Alemite, Zerk) bụ isi mmanu n'usoro sistemụ, yana griiz nwere ike ịgbakwunye site na griiz egbe. Site na itinye nrụgide na valvụ bọọlụ na dabara adaba, griiz ahụ ga-asọba n'ime ite mmanụ ...
Polyurethane na-eme nkụ mmiri?
Mba, polyurethane enweghi ike ime ka osisi ghara imesi ike, mana o nwere ike ime ka osisi ghara igbochi mmiri. Polyurethane na-enye nchebe maka osisi ike. Ọ nwere ike ịchụpụ mmiri ma gbochie ịmịkọrọ mmiri, mana ọ gaghị egbochi mmiri kpamkpam, yabụ na ọ gaghị eme ya 100% mmiri na-adịghị. Polyurethane nwekwara ike ichebe woo ...
High Pressure Grouting Machine Ngwa - Grouting Packer
1. Gịnị bụ ọgwụ Inye? A na-ejikarị ndị na-atụgharị ihe na Grouting, ndị a makwaara dị ka ihe ndị na-esi na mmiri, na-ejikwa mmiri na mmiri, tunnels, ime obodo, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke obodo na mpaghara ndị ọzọ, ọkachasị n'ọhịa kemịkalụ kemịkalụ. Ọ bụ isi ihe dị mkpa nke dị elu ...
Ghọta Waterproof Resin mkpuchi Rating On Tent
Onye ọ bụla na-emepụta ihe nwere ụzọ nke ya iji mee ụlọikwuu mmiri na-enweghị mmiri, UV na-eguzogide ọgwụ na iku ume n'otu oge ahụ. Uzo mmiri nke ihe di na millimita, nke bu nchoputa nke ichoro mgbe ichoro ulo ntu. Nọmba dị n'etiti 800 mm na 10,000 mm. Nọmba ahụ na-ezo aka ...